Kutheni Usikhetha-Mpuma Ekude
Uvulindlela kwi-Pulp ene-Biodegradable Pulp Molded Industryware Machinery Industry
1.Far East & Geotegrity ngumenzi wokuqala wesityalo sefayibha yokubumba oomatshini beetafile e-China ukusukela ngo-1992. Ngamava eminyaka engama-30 kwizixhobo ze-R & D zezityalo ze-tableware ezibunjiweyo ze-R & D kunye nemveliso, i-Far East yinqununu kule ndawo.
Singumvelisi ohlanganisiweyo ongagxili nje kuphela kubuchwephesha betheyibhuli yetafile ye-R & D kunye nokuvelisa umatshini, kodwa kunye nomenzi we-OEM oqeqeshiweyo kwitheyibhile ebunjiweyo, ngoku siqhuba oomatshini abangama-200 endlwini nakwamanye amazwe izikhongozeli ezingama-250-300 ngenyanga ukuya ngaphezulu kwama-70 amazwe kumazwekazi amathandathu.
2. KwiMpuma Ekude kunye neGeotegrity inezixhobo zombane zokonga amandla njengoomatshini abazenzekelayo kunye nokugcina amandla okusika simahla ukubetha koomatshini oomatshini abazenzekelayo kudidi, sinikezela ukufudumeza ioyile kunye nokufudumeza ngombane kukhetho loMthengi.
3. IMpuma Ekude kunye neGeotegrity zifumana ngaphezulu kweetekhnoloji ezingama-95 ezinelungelo elilodwa lomenzi kubandakanya ukonga umbane itekhnoloji yokufudumeza ioyile kunye nokusika simahla iteknoloji yokubetha simahla esinceda ukonga iindleko zeemveliso ezili-15%. Oomatshini baqinisekisiwe nge-UL kunye ne-CE. Isiqinisekiso sethu sokusebenza komatshini si: 50% yokonga umbane, ngaphezulu kwe-95% yexabiso lemveliso egqityiweyo, ngaphezulu kweminyaka eyi-15 yobomi benkonzo yomatshini kunye nokuvunda
4. KwiMpuma Ekude kunye neGeotegrity inikezela ngenkonzo yokumisa enye, kubandakanywa unyaka-omnye iwaranti yomatshini, uyilo lobunjineli, uyilo lwe-3D PID, uqeqesho kwisiza kumzi-mveliso womthengisi, ukufundiswa komatshini kunye nokugunyaziswa ngempumelelo kumzi mveliso womthengi, kugqityiwe isikhokelo sentengiso yemveliso njalo njalo.